I-Templafy: Ulawulo kunye neMveliso kuwo onke amaXwebhu, iiNtetho kunye nee-imeyile | Martech Zone
NgoMvulo, Meyi 21, 2018 Douglas Karr
Njengoko ujonga ngaphakathi kumbutho wakho ukufumana amathuba, bahlala ekunikezelweni kolwazi. Ukusuka kwintengiso ukuya kwintengiso, ukuthengisa kubathengi, abathengi ukubuyela kwintengiso, kwaye emva koko ukuthengisa kubuyela kwintengiso. Kwilizwe ledijithali, yonke le datha yokukopa, ukuhlela kunye nokuncamathisela ayiyomfuneko kwaphela. Iitemplate zinokuphuhliswa kuyo yonke inkqubo kunye neqela ngalinye ukuqinisekisa ukuthotyelwa, ukungqinelana kwebrendi, kunye namaxwebhu akumgangatho ophezulu ahanjiswa.
Itempile isetyenziswa ziimpawu kwihlabathi ukusombulula. into ekubhekiswa kuyo njenge, Uxwebhu lwe-Anarchy. Nantsi indlela i-Templafy eyenza ukuba kube lula ukuba wonke umntu ahlale kwi-brand kunye nokuthobela xa esenza amaxwebhu, iintetho kunye ne-imeyile.
I-Templafy inezi zinto zilandelayo kunye nezibonelelo:
Itemplate kunye nokuFikelela kuMxholo Amaxwebhu oshishino, izilayidi, imifanekiso, izinto ezibhaliweyo kunye nezinye iiasethi zedijithali ziyafumaneka ngqo apho wonke umntu ezifuna.
Amandla obuNtu -Zonke iitemplate zenkampani ziqhelanisa ngokuzenzekelayo neeprofayili zomqeshwa ngamnye ezidibanisa iinkcukacha zenkampani ezihlaziyiweyo kunye nolwazi lomntu siqu. Ngalo lonke ixesha umqeshwa esenza uxwebhu, i-Dynamics ngokuzenzekelayo iyazenzela izinto ezinamandla Itemplate yoxwebhu enolwazi kunye nendima yomqeshwa othile kumbutho wakho.
Ukuzenzekelayo kuXwebhu -Abaqeshwa ngokulula bawenza amaxwebhu antsonkothileyo ngokusebenzisa amaphepha emibuzo alula. Abalawuli banokuseta itemplate yoxwebhu oluphambili, umz. Iikhontrakthi okanye izindululo, ukuze abasebenzi bakhokelwe kukhetho olulula lokuzenzela ngokuzenzekelayo uxwebhu olulungiselelwe injongo ethile.
Ukuqinisekiswa kweBrand kunye noMxholo -Impahla yeBrand ezinjengeefonti, imibala yenkampani kunye neelogo zijongwa ngokuzenzekelayo ukuba ziyahambelana kwaye zihlaziywa ngokufanelekileyo. Nokuba yeyiphi eyona nto ibalulekileyo yokwenza uphawu okanye uphawu lweqela elithobelayo, akunakuphepheka ukuba abasebenzi baphinde basebenzise amaxwebhu amadala kunye neenkcazo-ntetho kwi-desktop yabo. Oku kuhlala kukhokelela kwi-off-brand kunye nokuba kungangqinelani ngokusemthethweni namaxwebhu.
Umphathi woTyikityo lwe-imeyile -Ukulawula ngaphakathi kwi-brand-brand, ukuthobela kunye nokusayina ii-imeyile ezityikitywe yinkampani ngokubanzi. I-Templafy ibonelela ngesisombululo esisekwe kwilifu, esibanjwe kwiMicrosoft Azure, ukuya lawula Utyikityo lweshishini lwe-imeyile kwiMicrosoft Outlook nakwiOfisi 365.
tags: ulawulo lwexwebhuUlawulo lokusayina lwe-imeyileukuthengisa utyikityo lwe-imeyileutyikityo lwe-imeyileImicrosoft 365Imicrosoft azureulawulo lweetemplate